Sidee loo abuuraa istaraatiijiyada ugu fiican ee boggaaga internetka?
Maqaalkani waxaa loogu talagalay inuu helo jawaab mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee la isweydiiyo "Sidee loo soo celiyaa website-ka?" Istaraatijiyado badan oo isku xira xiriirka ayaa noo oggolaanaya in aan abuurno xiriirin goobaha kale ee la xiriira. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood ma ahan kuwo loo yaqaan "organic". Dhab ahaantii, ma jiraan istiraatiijiyad dhisme oo kaliya, oo ku saleysan kaliya hababka dabiiciga ah. Shabakadaha qaarkood, hal istaraatij ayaa ku siin kara natiijooyin wax ku ool ah oo SEO ah iyo bixiyaan fursado dhisme oo wanaagsan. Habka isku midka ah ee loogu talagalay dadka kale kama muuqan karaan magac caan ah ama xitaa kharashka.
Waqti ahaan, istiraatiijiyadaha isku xirka ee kala duwan ayaa u muuqda inay noqdaan kuwo waxtar badan ama waxtar leh. Qaar ka mid ah farsamooyinka soo saarida farsamooyinka waxay si fiican u shaqayn karaan, ka dibna dabeecadaha isticmaala waxay bilaabanayaan inay isbeddelaan sidaa daraadeed istiraatijiyaddaadu waa inay bedesho.
Sidee loo qorsheeyaa istaraatiijiyada dhismaha ee isku-xirnaanta?
Si aad u abuurto istaraatiijiyada dhismahaaga, waxaad u baahan tahay inaad eegto istiraatijiyada istiraatiijiga ah gaar ahaan suuqa xorta ah. Hubi dhammaan dhamaantood si ay u fahmaan kuwa u shaqeynaya ganacsigaaga internetka ugu fiican. La soco waxa ka shaqeeya oo tijaabiya fikradaha cusub. Had iyo jeer waa cunto si aad u hesho badan oo ah xeelado isku dhejinta xiriirka guuleysta, maxaa yeelay waxay ku siineysaa fursad aad ku abuurto macluumaad dheer oo dabiici ah. Maadaama suuqa suuqu yahay mid joogto ah oo la bedeli karo, waxay noqon doontaa mid macquul ah in la isku dayo habab cusub.
Maxay khatar u tahay isticmaalka barnaamijyada dhismaha isku xirka?
Maalmahan, waxaa jira tiro barnaamijyo isku dhafan oo isku xiran kuwaas oo kaliya loogu talagalay in ay lacagtaada kaa saaraan. Waxay u ballan-qaadayaan dadka websaydhiga ah inay abuuraan boqolaal kun oo taageerayaal ah oo ka soo jeeda goobo heer sare ah muddo gaaban. Dadka waayo-aragnimo leh ee ku jira raadinta mashiinka raadinta waxay og yihiin in aysan macquul ahayn oo codadka aad u fiicnayn inay noqdaan run. Dhab ahaantii, geedi socodka dhismaha xidhiidhku wuxuu qaataa bilooyin wuxuuna u baahan yahay shaqo badan oo adag. Xitaa haddii mashruuc isku xirka spammy ee dhismaha uu shaqeynayo, hadda, Google waxay u badan tahay inay ogaan karto iyo ganaax, ama xitaa ka sii xun ugana dhigo goobtaada ciqaab daran. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad ka fogaato nidaamyadaas oo aad diirada saarto istiraatiijiyooyinka xiriirinta dabiiciga ah.
Dhaqdhaqaaqa dabiiciga ah waa WAA INAAD!
Backlinks dabiiciga ah waa iskuxiraad aad ku hesho adiga oo aan cid weyddiin in ay isku xiraan goobtaada. Sida caadiga ah, waxaad heleysaa xiriiradaas adoon lahayn aqoontaada. Waxay u adeegtaa si aad u fudud. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa maqaal aad jeceshahay oo ku xiran tahay boggaaga. Waa inaad ka warqabtaa in Google jecel yahay xiriirinta dabiiciga ah iyo abaalmarinta bogagga shabakadda kuwaas oo u keenaya darajo sare oo ku saabsan bogga natiijada raadinta. Taasi waa sababta noocyada noocan oo kale ah waa ugu badbaado badan. Waxaad si cad u hubin kartaa inaysan waligood hoos u dhicin Google.
Dhismaha isku xidhka keligiis shaqeeya
Milkiilaha bogga wuxuu raadiyaa istaraatijiyad dhisme oo isku xiran. Haddii aad jeclaan lahayd inaad heshid istaraatijiyad aan u baahnayn shaqo joogto ah adigoo helaya xiriir kasta, blogku waa fursada ugu fiican. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad abuurto blog ku salaysan mawduucyada warshadaha oo aad si joogto ah ugu dhajiso maqaallo wax ku ool ah oo faa'iido u leh isticmaalayaasha. Haddii aad ku siin karto dadka isticmaala waxyaabo faa'iido leh, waxay kugula xiriiri doonaan maqaalkaaga iyo inaad abuurto isku-xiro badan oo badan oo jimicsi ah goobtaada Source .